ပွင့်လင်းရိုးသားမှု—သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် အကြောင်းရင်း ၂
နိုးလော့! | နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
ဖတ်လို ကိုရီးယား ခရိုအေးရှား ချက် ဂရိ ဂျပန် ဂျာမန် စပိန် စလိုဗက် စလိုဗေးနီးယား စီဘွာနို ဆားဗီးယား (စီရီးလစ်) ဆွီဒင် တဂါးလော့ တရုတ် မန်ဒရင်း(ခေတ်သုံး) တရုတ် မန်ဒရင်း(ရှေးသုံး) တူရကီ ထိုင်း ဒတ်ချ် ဒိန်းမတ် နော်ဝေ ပိုလန် ပေါ်တူဂီ (ဘရာဇီး) ပြင်သစ် ဖင်လန် ဗီယက်နမ် ဘူလ်ဂေးရီးယား မြန်မာ ယူကရိန်း ရိုမေးနီးယား ရှိုစာ လစ်သူယေးနီးယား လတ်ဗီးယား ဟန်ဂေရီ ဟီလီဂေနွန် အက်စတိုးနီးယား အင်ဒိုနီးရှား အင်္ဂလိပ် အမ်ဟာရစ် အယ်လ်ဘေးနီးယား အာဖရိက အာရဗီ အိုက်စလန် အီတလီ အီလိုကို
သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် အကြောင်းရင်းများ
ယုံကြည်စိတ်ချမှုသည် ပွင့်လင်းရိုးသားမှုအပေါ် အခြေပြုသည်။ ပွင့်လင်းရိုးသားသူအဖြစ် နာမည်ကောင်းရှိထားသူတစ်ဦးသည် သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို ရနိုင်သော်လည်း ၎င်းသည် သင့်အား တစ်ကြိမ်သာ လိမ်ညာလိုက်ပါက သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုကို ဆုံးရှုံးရပေမည်။
ကျမ်းရေးသူများသည် ပွင့်လင်းရိုးသားသူများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့၏အရေးအသားများသည် ယုံကြည်စိတ်ချရကြောင်း ၎င်းတို့၏ပွင့်လင်းရိုးသားမှုက အထင်အရှားဖော်ပြသည်။
ကျမ်းရေးသူများသည် မိမိတို့၏အားနည်းချက်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖွင့်ဟဝန်ခံခဲ့ကြ၏။ မောရှေသည် မိမိအမှားပြုမိသဖြင့် ဆိုးရွားသောအကျိုးဆက်များ ခံစားခဲ့ရကြောင်း ပြောပြသည်။ (တောလည်ရာ ၂၀:၇-၁၃) အာသပ်သည် တစ်ချိန်တွင် လူဆိုးများ၏ဘဝ ကောင်းစားနေသည်ကို မနာလိုဖြစ်မိကြောင်း ရှင်းပြခဲ့၏။ (ဆာလံ ၇၃:၁-၁၄) ယောနသည် မနာခံခဲ့ကြောင်း၊ နောင်တရသောအပြစ်သားများအပေါ် ဘုရားသခင် သနားကြင်နာမှုပြသောအခါ အစပိုင်းတွင် မိမိ၌ အပျက်သဘောထားရှိခဲ့ကြောင်း ၎င်းကပြောပြ၏။ (ယောန ၁:၁-၃; ၃:၁၀; ၄:၁-၃) မဿဲသည် ယေရှုအဖမ်းခံရသည့်ညတွင် မိမိကိုယ်လွတ်ရုန်းထွက်ပြေးခဲ့ကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြသည်။—⁠မဿဲ ၂၆:၅၆။
ဟေဗြဲကျမ်းစောင်များကို ရေးသားခဲ့သူတို့သည် မိမိတို့အမျိုးသားချင်းများ၏ ထပ်ခါတလဲလဲ ညည်းတွားမြည်တမ်းမှုနှင့် ပုန်ကန်မှုတို့ကို ထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့ကြ၏။ (၂ ရာဇဝင်ချုပ် ၃၆:၁၅၊ ၁၆) အဆိုပါကျမ်းရေးသူတို့သည် မိမိတို့တိုင်းပြည်၏ အုပ်စိုးရှင်များအကြောင်းကိုပင် မချန်ဘဲ ရေးသားခဲ့ကြလေသည်။ (ယေဇကျေလ ၃၄:၁-၁၀) တမန်တော်များ၏စာများတွင်လည်း တာဝန်ရှိသူများအပါအဝင် ခရစ်ယာန်တစ်ဦးချင်းစီနှင့် အေဒီပထမရာစုရှိ အသင်းတော်တချို့ တွေ့ကြုံခဲ့ရသည့် ကြီးလေးသောပြဿနာများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း တင်ပြထားကြသည်။—⁠၁ ကောရိန္သု ၁:၁၀-၁၃; ၂ တိမောသေ ၂:၁၆-၁၈; ၄:၁၀။
ယောနကဲ့သို့သော ကျမ်းရေးသူတို့သည် မိမိတို့၏အမှားများကို မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြ
ကျမ်းရေးသူတို့သည် စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော အမှန်တရားဟု တချို့ယူဆကောင်းယူဆကြမည့်အရာကို ဖုံးကွယ်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့ကြချေ။ ပထမရာစုခရစ်ယာန်များသည် လောက၏ချီးမွမ်းမှုကို ခံရမည့်အစား စဉ်းစားဉာဏ်မဲ့သူ၊ ယုတ်ညံ့သူအဖြစ် အထင်အမြင်သေးခံရကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံခဲ့ကြသည်။ (၁ ကောရိန္သု ၁: ၂၆-၂၉) ယေရှု၏တမန်တော်များသည် “ပညာတတ်များမဟုတ်၊ သာမန်လူများ” သာဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ခံရကြောင်း ကျမ်းရေးသူများက ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။—⁠တမန်တော် ၄:၁၃၊ ကဘ။
ခရစ်ဝင်ကျမ်းရေးသူများသည် ယေရှုကို ပို၍အထင်ကြီးစေရန် အဖြစ်မှန်များကို လိုရာဆွဲ၍မပြောခဲ့ကြချေ။ ယင်းအစား ယေရှုသည် အလုပ်သမားလူတန်းစားမိသားစုတွင် နိမ့်ကျသောအခြေအနေဖြင့် မွေးဖွားလာခဲ့ကြောင်း၊ သူ့ခေတ်က နာမည်ကြီးကျောင်းများတွင် စာမသင်ခဲ့ရကြောင်း၊ သို့နှင့် ကိုယ်တော်၏တရားကို နားထောင်သူအများစုက လက်မခံခဲ့ကြကြောင်း ရိုးသားပွင့်လင်းစွာ ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။—⁠မဿဲ ၂၇:၂၅; လုကာ ၂:၄-၇; ယောဟန် ၇:၁၅။
ကျမ်းစာကို ပွင့်လင်းရိုးသားသူများက ရေးသားခဲ့ကြောင်း လုံလောက်သော အထောက်အထားများကို သမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြသည်မှာ ရှင်းနေပါသည်။ ၎င်းတို့၏ပွင့်လင်းရိုးသားမှုကြောင့် သမ္မာကျမ်းစာကို သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည် မဟုတ်ပေလော။
သမ္မာကျမ်းစာကို ယုံကြည်စိတ်ချရသည့် အကြောင်းရင်းများ—ပွင့်လင်းရိုးသားမှု
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ပြိုင်ဘက်ကင်းသော စာအုပ်တစ်အုပ်
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ၁။ သမိုင်းဆိုင်ရာ တိကျမှန်ကန်မှု
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ၂။ ပွင့်လင်းရိုးသားမှု
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ၃။ အတွင်းသဘောချင်း ကိုက်ညီမှု
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ၄။ သိပ္ပံဆိုင်ရာ တိကျမှန်ကန်မှု
မျက်နှာဖုံး​အကြောင်းအရာ ၅။ ပရောဖက်ပြုချက်ကို ပြည့်စုံစေ
စာသား စာပေ ကူးယူရာမှာ ရွေးချယ်စရာများ နိုးလော့! နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇
နိုးလော့! နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၇